ch 10 မာကု – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / မာကု၏ဧဝံဂေလိတရားကို / ch 10 မာကု
10:1 ထ, သူသည်ယော်ဒန်မြစ်ယုဒဧရိယာသို့ရှိထံမှထွက်သွား. တဖန်တုံ, လူအစုအဝေးရှေ့တော်၌စည်းဝေးကြ၏. ထိုအပြုလေ့ရှိသောခဲ့သကဲ့သို့, နောက်တဖန်သူသည်သူတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေး.
10:2 နှင့်နီးကပ်လာ, ဖာရိရှဲတို့ကသူ့ကိုမေးခွန်းထုတ်, သူ့ကိုစမ်းသပ်: "အပ်တဲ့လူကိုသူ့ဇနီးကပယ်ချရန်အဘို့အ Is?"
10:3 သို့သော်တုန့်ပြန်, သူတို့ပြောဆို, "မောရှေသည်သင်တို့အားအဘယ်သို့တို့ကိုသွန်သင်ခဲ့ပါ?"
10:4 ထိုသူတို့ကပြောပါတယ်, "မောရှေကွာရှင်းခြင်း၏ဥပဒေကြမ်းရေးသားဖို့နဲ့သူမရဲ့ပယ်ချဖို့ခွင့်ပြုချက်ကိုပေး၏။ "
10:5 သို့သျောယရှေုသဖြင့်တုန့်ပြန် ဆို.: "ဒါဟာသူသည်သင်တို့အဘို့အကြောင်းပညတ်ကိုရေးထားကြောင်းကိုသင်၏နှလုံး၏ခိုင်မာသောကြောင့်.
10:6 သို့သော်ဖန်ဆင်းခြင်း၏အစအဦးထံမှ, ဘုရားသခင်သည်သူတို့အားယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏.
10:7 ဒီအတွက်ကြောင့်, တစ်ဦးသောသူသည်မိမိဖခင်နှင့်မိခင်နောက်ကွယ်မှချန်ခြွင်းရမည်, သူသည်မိမိမယားကိုမှီဝဲရကြလိမ့်မည်.
10:8 နှင့်ဤနှစ်ဦးဇာတိပကတိ၌တဦးတည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်. ဆိုတော့, အခုသူတို့ဖြစ်ကြသည်, မဟုတ်နှစ်ဦး, ဒါပေမယ့်သားတကိုယ်တည်း.
10:9 ထို့ကြောင့်, ဘုရားသခင့အတူတကွမှီဝဲသောအရာကို, အဘယ်သူမျှမခွဲမခွါစေ။ "
10:10 တဖန်တုံ, ဗိမာန်တော်၌, မိမိတပည့အတူတူပါပဲအကြောင်းသူ့ကိုမေးခွန်းထုတ်.
10:11 ထိုသူတို့အားဆို၏: "သူမည်သည်ကားမိမိမယားကိုပယ်ချ, နှင့်အခြားလက်ထပ်, သူမ၏ဆန့်ကျင်ဖောက်ပြန်ကျူးလွန်.
10:12 ထိုအခါမိန်းမသည်မိမိခင်ပွန်းပယ်ချလျှင်, တယောက်သောသူအားလက်ထပ်, သူမဖောက်ပြန် commits ။ "
10:13 ထိုသူတို့ကသူ့ကိုရန်သူငယ်ကိုဆောင်ခဲ့, သူသည်သူတို့ကိုမထိစေခြင်းငှါဤမျှ. သို့သော်တပည့်သူတို့ကိုပို့ဆောင်သောသူတို့အားဤသို့သတိပေးခဲ့.
10:14 သို့သျောယရှေုကဒီကိုမြင်သောအခါ, သူ မိ. လဲစရာအကြောင်းယူ, သူကထိုသူတို့အားပြောဆို: "သူငယ်ကိုငါ့ထံသို့လာရန် Allow, သူတို့နှင့်မတားမြစ်ပါဘူး. ထိုကဲ့သို့သော၏ဤဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ဖြစ်သကဲ့သို့.
10:15 အာမင်ငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, အကြင်သူသည်အနည်းငယ်ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့အဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ကိုလက်ခံမည်မဟုတ်, ဒါကြောင့်ထဲသို့မဝင်ရမည်မဟုတ်။ "
10:16 ထိုအခါသူတို့ကိုလက်ခံ, သူတို့အပျေါမှာမိမိလက်ကိုတင်သော, သူကသူတို့ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာ.
10:17 သူသည်ထိုအသွားရာလမ်းပေါ်တွင်ထွက်သွားကြပြီးမှ, လူတယောက်တစျခု, ပွင့်လည်ပတ်နေနှင့်သူ့ရှေ့မှာဒူးထောက်, သူ့ကိုမေးခဲ့တယ်, "ကောငျးအရှင်ဘုရား, ငါဘာလုပ်သင့်လဲ, ငါထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းငှါဒါ secure?"
10:18 သို့သော်ယေရှုက, "ဘာကြောင့်ကောင်းသောငါ့ကိုခေါ်? အဘယ်သူမျှမတဦးတည်းဘုရားသခင်မှတပါးအဘယ်သည်ကောင်း.
10:19 သငျသညျဥပဒသေမြားကိုသိရ: "မျောက်မနေပါနဲ့. မသတ်ပါနဲ့. မခိုးမ. မမှန်သောသက်သေကိုမပွောပါနှငျ့. လှည့်ဖြားမနေပါနဲ့. သင်၏အဘနှင့်မိခင်ရိုသေစွာပြုလော့။ "
10:20 သို့သော်တုန့်ပြန်, သူ့ကိုအားဆို၏, "အရှင်ဘုရား, ဤသူအပေါင်းတို့ကိုငါသည်ငါ့ငယ်သောအရွယ် မှစ. လေ့လာတွေ့ရှိပြီ။ "
10:21 ထိုအခါယေရှုသည်, သူ့ကိုငေး, ချစ်., သူကသူ့ကိုအားဆို၏: "အရာတစ်ခုမှာသင်မှချို့တဲ့သော. Go ကို, သင်ရှိသည်သမျှကိုမရောင်း, နှင့်ဆင်းရဲသောအားပေးမည်ဟု, ပြီးနောက်သင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ဘဏ္ဍာကိုရလိ​​မ့်မည်. လာ, ကိုယ့်နောက်လိုက်ခဲ့ပါ။"
10:22 ဒါပေမယ့်သူကဝမ်းနည်းသို့သှားကွ၏, အလွန်စကားအားဖြင့်ဝမ်းနည်းခဲ့ကြပြီးမှ. သူသည်များစွာသောဥစ္စာဘို့.
10:23 ထိုအခါယရှေု, ပတ်လည်ကြည့်ရှု, ပည့်တော်တို့အားမိန့်, "စည်းစိမ်ဥစ္စာရှိသူတို့ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရန်အဘို့အကမည်သို့ခက်ခဲသည်!"
10:24 ထိုအခါတပည့်သူ၏စကားမှာအလွန်တရာအံ့ဩကြ၏. သို့သျောယရှေု, နောက်တဖန်အဖြေဆိုခြင်း, ထိုသူတို့အားပြောဆို: "Little ကအမြိုးသားတို့, ပိုက်ဆံခိုလှုံသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ဝင်သည်ဘယ်လောက်ခက်ခဲသည်!
10:25 တစ်ဦးကုလားအုပ်အပ်၏မျက်စိရှောက်သွားဘို့ကလွယ်ကူသည်, ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ဝင်မှသူဌေးသည်ထက်။ "
10:26 ထိုသူတို့က ပို. ပင်အံ့ဩမိန်းမော, ဟုအချင်းချင်းပြောဆိုပြီး, "အဘယ်သူသည်, ထို့နောက်, ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်လို့ရပါတယ်?"
10:27 ထိုအခါယရှေု, သူတို့ကိုငေး, ကပြောပါတယ်: "လူနှင့်အတူကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဘူး; ဒါပေမယ့်ဘုရားမနှင့်အတူ. ဘုရားသခင်နှင့်အတူအဘို့အခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ "
10:28 ထိုအခါပေတရုကသူ့ကိုအားဆင့်ဆိုရမည်မှာစတင်, "အကယ်, ငါတို့ရှိသမျှသည်အမှုအရာကျန်ကြွင်းစေပြီနှင့်သင်နောက်တော်သို့လိုက်ကြပြီ။ "
10:29 တုန့်ပြန်, ယရှေုသညျဟုပြောသည်: "အာငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, အိမ်သူအိမ်သားကျန်ရစ်ခဲ့သူတယောက်မျှမရှိ, သို့မဟုတ်ကညီအစ်ကိုတွေ, သို့မဟုတ်ညီအစ်မတွေ, သို့မဟုတ်ဖခင်, သို့မဟုတ်မိခင်, သို့မဟုတ်ကလေးများ, သို့မဟုတ်မြေ, ငါ့အဘို့အလိုငှါဧဝံဂေလိတရားနှင့်အများအတွက်,
10:30 အများကြီးအဖြစ်တရာကြိမ်မခံမမည်သူ, ယခုဤအချိန်အတွက်: အိမ်များ, နှငျ့ညီ, အစ်မတွေ, နှင့်မိခင်များ, နှင့်ကလေးများ, နှင့်မြေယာ, ညှဉ်းဆဲခြင်းနှင့်အတူ, နှင့်အနာဂတ်အသက်အရွယ်အားဖြင့်ထာဝရအသက်တာ၌.
10:31 ဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံးအများတို့သည်လည်းနောက်ဆုံးရကြလိမ့်မည်, သူ, နောက်ဆုံးသောပထမဦးဆုံးဖြစ်ရလိမ့်မည်။ "
10:32 အခုတော့သူတို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့တက်လမ်းမှာခဲ့ကြသည်. ယရှေုသရှေ့မှာသွားလျက်, နှင့်အလွန်တရာအံ့ဩကြ၏. သူ့ကိုအောက်ပါသူတို့အားကြောက်ရွံ့ကြ. တဖန်တုံ, တကျိပ်နှစ်ပါးဘေးဖယ်တာ, သူ့ကိုမှဖြစ်ပျက်အကြောင်းဘာကသူတို့ကိုပြောပြရန်စတင်.
10:33 "ကှ္ဂျကှ္ဂျသည်, ယေရုရှလင်မြို့သို့တက်သွားကြသည်, နှင့်လူသားသည်ယဇ်ပုရောဟိတ်၏ခေါင်းဆောင်များလွှဲပြောင်းပေးအပ်ပါလိမ့်မည်, နှင့်ကျမ်းပြုဆရာတို့မှ, နှင့်အသက်ကြီးသူတို့. ထိုသူတို့ကအသေခံဖို့သူ့ကိုတရားရှုံးစေမည်, သူတို့သည်တပါးအမျိုးသားတို့ထံသို့လွှဲပြောင်းပေးရန်ဦးမည်.
10:34 ထိုသူတို့ကသူ့ကိုကဲ့ရဲ့လိမ့်မယ်, သူ့ကိုတံတွေးထွေး, သူ့ကိုရိုက်, နှင့်သူ့ကိုသတ်. ထိုအခါသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌, သူသည်နောက်တဖန်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်။ "
10:35 ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်နှင့်, ဇေဗေဒဲ၏သားတို့သည်, သူ့ကိုချဉ်း ကပ်., ဟုဆို, "အရှင်ဘုရား, ကျွန်ုပ်တို့သည်မေးပါလိမ့်မယ်သမျှကိုအလိုရှိ၏, သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုအဘို့ပြုလိမ့်မယ်။ "
10:36 ဒါပေမယ့်သူကထိုသူတို့အားပြောဆို, "သင်ငါ့ကိုအသင်တို့အဘို့အဘယျသို့ပွုခငျြဘူး?"
10:37 ထိုသူတို့ကပြောပါတယ်, "ကျနော်တို့ထိုင်စေခြင်းငှါကျွန်တော်တို့ကို Grant, သင့်ရဲ့ဘယ်ဖက်မှာသင့်ရဲ့လက်ျာဘက်နှင့်အခြားတ, သင့်ရဲ့ဘုန်းအသရေ၌တည်၏။ "
10:38 သို့သော်ယေရှုက: "သင်အဘယ်သို့တောင်းပန်သည်ကိုသင်တို့မသိကြဘူး. ငါသည်သင်တို့ကိုမသောက်ရသောအထဲက chalice ကနေကိုမသောက်နိုင်ကြသည်, ဒါမှမဟုတ်ငါဗတ္တိဇံကိုခံရဖို့ဖြစ်ကြောင်းကိုသောဗတ္တိဇံနှင့်အတူဗတ္တိဇံကိုခံရဖို့?"
10:39 ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူ့ကိုအားဆို၏, "ကျနော်တို့က။ နိုင်ပါ" ထိုအခါယေရှုက: "တကယ်ပါပဲ, သင် chalice ထံမှသောက်ရလိမ့်မည်, ငါမသောက်ရရာမှ; သင်ဗတ္တိဇံနှင့်အတူဗတ္တိဇံကိုခံရကြလိမ့်မည်, ငါဗတ္တိဇံကိုခံရဖို့ဖြစ်၏ဟူသောနှင့်အတူ.
10:40 ဒါပေမယ့်ငါ့လက်ျာမှာထိုင်ဖို့, သို့မဟုတ်ငါ့အလက်ဝဲမှာ, သတ္တုတွင်းသင်တို့ဆီသို့မပေးရန်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုပြင်ဆင်တော်မူသောအဘို့သူတို့အဘို့ဖြစ်၏။ "
10:41 ထိုအခါတကျိပ်, ဒီအနားမကြားအပေါ်သို့, ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်မျက်နှာသို့မကျြထှကျခံရဖို့စတင်.
10:42 သို့သျောယရှေု, သူတို့ကိုခေါ်ဆိုခြင်း, ထိုသူတို့အားပြောဆို: "သင်တို့သည်တပါးအမျိုးသားတို့ခေါင်းဆောင်များကဖြစ်ပုံပေါ်သောသူတို့ကိုထိုသူတို့ကိုလွှမ်းမိုးကြောင်းကိုသိရ, နှင့်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်များကိုသူတို့အပေါ်မှာအာဏာ.
10:43 သို့သော်ထိုသို့သင်တို့တွင်အဤနည်းလမ်းဖြစ်သည်မဟုတ်. အဲဒီအစား, အကြင်သူသည် သာ. ကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်သင့်ရဲ့ဝန်ကြီးဖြစ်ရလိမ့်မည်;
10:45 ဒါကြောင့်, လွန်း, လူသားသည်ထိုသူတို့သညျမှဝန်ကြီးလိုဒါကြောင့်လာမမူ, သို့သော်ဤမျှသူဝန်ကြီးလိုခြင်းနှင့်လူမြားအဘို့ရွေးနှုတ်တော်မူတစ်ဦးအဖြစ်သူ၏အသက်ကိုပေးလိမ့်မယ်လို့။ "
10:46 ထိုသူတို့သညျယေရိခေါမြို့သို့သှားကွ၏. ထိုအတပညျ့တျောတို့နှငျ့ယေရိခေါမြို့မှထွက်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးအလွန်များပြားလှသောလူအစုအဝေးအဖြစ်ခဲ့သည်, Bartimaeu​​s, Timaeu​​s ၏သား, တစ်လူကန်း, လမ်းကိုအနားမှာထိုင်လျက်တောင်းပန်.
10:47 သူကနာဇရက်မြို့သားယေရှုဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုကြားလျှင်, သူအော်ဟစ်တတ်ဖို့နဲ့ပြောရစတင်ခဲ့, "ယေရှု, ဒါဝိဒ်၏သားတော်ဖြစ်သည်, အကြှနျုပျကိုသနားယူ။ "
10:48 လူအများတို့သည်အထံတော်တိတ်ဆိတ်တဲ့ဖြစ်ကသတိပေးခဲ့. ဒါပေမဲ့သူအပေါငျးတို့သ သာ. ဟစျကျွော, ဒါဝိဒ်၏ "သားတော်, အကြှနျုပျကိုသနားယူ။ "
10:49 ထိုအခါယရှေု, နေဆဲရပ်နေ, ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရဖို့သူ့ကိုညွှန်ကြားထား. ထိုသူတို့ကပင်မျက်စိကန်းသောသူကိုခေါ်တော်, သူ့ကိုဟု: "ငြိမ်းချမ်းရေးမှာ Be. ထလော့. သူသည်သင်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ "
10:50 နှင့်သူ၏အဝတ်တန်ဆာကိုဘေးဖယ်ချ, သူဖွင့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ထံတော်သို့သွားလေ၏.
10:51 နှင့်တုန့်ပြန်, ယရှေုကလညျး, "သင်ဘာလိုချင်ပါသလဲ, ငါသည်သင်တို့အဘို့ပြုသင့်ကြောင်း?"ထိုအခါမျက်စိကန်းသောသူသညျဟုမိနျ့, "မာစတာ, ငါမြင်စေခြင်းငှါ။ "
10:52 ထိုအခါယရှေုကလညျး, "Go ကို, သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်း။ သငျသညျတပြင်လုံးကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ "ထိုခဏသူကိုမြင်လျှင်, သူကလမ်းကိုအပေါ်သူ့ကိုနောက်တော်သို့လိုက်.